Wasiirkii Arrimaha Gudaha Somalia Oo Qarax Lala Beegsaday Ku Geeriyooday, Mudaharaadyo Rabshado Wata Oo Gigillay Magaalada Muqdsiho Iyo Xaalada Oo Faraha Ka Baxday | Araweelo News Network (Archive) -
Muqdisho(ANN) Wasiirkii arrimaha gudaha iyo aminiga dawladda taagta daran ee Soomaaliya Cabdi Shakuur Sheekh Xasan ayaa ku geeriyooday qarax maanta lala beegsaday, isagoo ku sugan gurigiisa, wuxuuna
geeriyooday cusbitaalka magaalada Muqdisho ee Banaadir oo dhaawac ahaan loo geeyay. Kadib markii gabadh gurigiisa ku noolayd la beegsatay qarax miidaamo ah.
Dhinaca kale Mudaharaadyo rabshado wata ayaa hadheeyay magaalada Muqdisho maalintii labaad, Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay banaanbaxyada rabshadaha wata, kuwaas oo lagu diidan yahay in uu is casilo Raiisul Wasaaraha Dowladda taagta daran ee KMG ah oo marka horeba magac u yaal ahayd,. Mudaharaadayaasha ayaa dab qabadsiiyay oo taayiro ku gubay wadooyinka mihiimka ah, iyagoo khasaare gaadhsiiyay goobo gaar loo leeyahay.
Wasiir ka tirsan xukuumadda taagta darani ayaa shalay heegay inuu aqbalay Raysal wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Soo jeedinta is casilaada, balse Ra’iisal wasaare Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xalay magaalada Muqdisho kula hadlay dad badan oo ka codsaday inuu xafiiska sii joogo. Kadib markii ay kasoo laabteen shirkii ka socday Kampala, iyagoo kasoo degey madaarka Muqdisho raysal waraaha iyo madaxweyne Shariif.
Markaa ka dib boqolaal qof oo xalay isugu tegay xafiiskiisa Raysal wasaaraha ayaa waxay sheegeen in ay aad uga niyad jabsan yihiin heshiiskii laga soo saaray kulamadii ka socday magaalada Kampala, waxayna sheegeen inaanay meelna u socon oo ay isaga garab taagan yihiin.
Ra’iisal wasaaraha ayaa u sheegay dadweynihii halkaa isugu soo baxay inay guryohooda ku hoydaan oo ay caruurta u tagaan, isla markaana uu rajeynayo in wax walba ay si fiican ku dhammaan doonaan.
Qodobada heshiiskii lagu gaadhay kulamadii ka socday Kampala, waxaa ku jiray qodob dhigaya in ra’iisal wasaare Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu bil gudeheed isaga casilo jagada ra’iisal wasaaraha, taas oo keentay inay magaalada Muqdsiho ka abuurto debedbaxyo rabshada wata oo keenay khasaare dhimasho iyo dhaawacba.